रेडियो ताप्लेजुङ तपाईंको प्रदेशमा कस्तो छ वित्तीय पहुँच ?
तपाईंको प्रदेशमा कस्तो छ वित्तीय पहुँच ?
असार ५ गते । मुलुक संघीयतामा गएपछि पनि अधिकांश वित्तीय सेवा सुविधा अझै काठमाडौं उपत्यका (प्रदेश तीन) मै केन्द्रित छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संकलन गरेको कुल निक्षेपको करिब ७२ प्रतिशत र ती संस्थाबाट प्रवाह भएको कुल कर्जाको ५७ प्रतिशत हिस्सा प्रदेश तीनमै रहेकाले यस्तो देखिएको हो ।
कुल निक्षेपमा बाँकी ६ वटा प्रदेशको हिस्सा २८ प्रतिशत र कर्जा प्रावहमा ४३ प्रतिशत मात्र रहेको राष्ट्र बैंकको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखएको छ ।
हाल २८ वटा वाणिज्य बैंक, ३६ विकास बैंक र २५ वटा फाइनान्स कम्पनी छन् । ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल ३ हजार ६ सय ६३ शाखामार्फत मुलुकभर वित्तीय सेवा दिँदै आएका छन् । संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा गठन भएका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ०७५ बैशाखसम्म ५ सय ३१ वटामा वाणिज्य बैंकको उपस्थिति छ ।
हेर्नुस तपाईंको प्रदेशमा कुन वर्गका कति बैंक पुगेका छन् रु प्रति शाखामा आश्रित जनसंख्या कति हो रु वित्तीय पहुँच र साक्षरताको अवस्था कस्तो छ रु
प्रदेश १ स् गत चैतसम्म यो प्रदेशमा वाणिज्य बैंकको ४ सय ६, विकास बैंकको १ सय १३ र वित्त कम्पनीको ३८ गरी ५ सय ५७ शाखा छन् । यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल शाखाको १५।२ प्रतिशत हो । यो प्रदेशमा एउटा शाखाले ८ हजार ६ सय ३७ जना नागरिकलाई वित्तीय सेवा पुर्‍याउँदै आएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेपमा यो क्षेत्रको योगदान ६ प्रतिशत छ । यस्तै, यो प्रदेशले कुल ऋण प्रवाहको १२ प्रतिशत उपयोग गरेको छ । यो प्रदेशमा रहेका १ सय ३७ स्थानीय तहमध्ये ९७ वटामा वाणिज्य बैंकको शाखा पुगेका छन् ।
प्रदेश २ स् बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल शाखामध्ये ९ प्रतिशत यो प्रदेशमा छन् । जसमध्ये वाणिज्य बैंकको २ सय ७४, विकास बैंकको ४१ र वित्त कम्पनीको १७ वटा गरी कुल ३ सय ३२ शाखा प्रदेश २ मा छन् । यो प्रदेशमा प्रतिशाखा आश्रित जनसंख्या १७ हजार ९ सय ७३ छ । आश्रित जनसंख्या अन्य ६ वटा प्रदेशभन्दा बढी हो । यसको अर्थ यो प्रदेशमा सञ्चालन भएको एउटा शाखाले करिब १८ हजार जनसंख्यालाई वित्तीय सेवा पुर्‍याउँदै आएका छन् भन्ने हो । यो प्रदेशमा कुल निक्षेप संकलनको ४ प्रतिशत मात्र संकलन हुँदै आएको छ । कर्जा उपयोगका हिसाबमा यो प्रदेश सामान्य नै देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा प्रवाह मध्ये यो प्रदेशको अंश ८ प्रतिशत छ । यो प्रदेशमा पर्ने १ सय ३६ स्थानीय तहमध्ये गत वैशाखसम्म १ सय २ वटामा वाणिज्य बैंक पुगिसकेको छ ।
प्रदेश ३ स् उपलब्ध शाखाका आधारमा प्रदेश तीन सबैभन्दा अघि छ । यो प्रदेशमा वाणिज्य बैंकका ९ सय ४१, विकास बैंकका २ सय ५२ र वित्त कम्पनीका ७० गरी १ हजार २ सय ६३ शाखा सञ्चालनमा छन् । यो कुल शाखा संख्याको करिब साढे ३४ प्रतिशत हो । यो क्षेत्रमा प्रतिशाखा आश्रित जनसंख्या ४ हजार ८ सय ५३ जना छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संकलन गरेको कुल निक्षेपमा करिब ७२ प्रतिशत योगदान यो प्रदेशको छ । यसैगरी, कुल कर्जा प्रवाहको ५७ प्रतिशत अंश यी प्रदेशले उपयोग गरिरहेको राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । यो प्रदेशमा रहेका १ सय १९ स्थानयि तहमध्ये ९५ वटामा बैंक पुगिसकेको छ । बाँकी २४ वटा स्थानीय तह अझै बैंक विहिन छन् ।
प्रदेश ४ स् वाणिज्य बैंकका ३ सय ४, विकास बैंकका २ सय ६ र वित्त कम्पनीका २५ गरी ५ सय ३५ शाखा यो क्षेत्रमा सञ्चालित छन् । यो मुलुकभर सञ्चालित कुल शाखा संख्याको करिब साढे १४ प्रतिशत हो । प्रतिशतमा हेर्दा थोरै देखिएपनि यो प्रदेशमा प्रतिशाखा आश्रित जनसंख्या सबैभन्दा कम छ । यो प्रदेशमा रहेका पत्येक शाखाले ४ हजार ६ सय ४० जनालाई वित्तीय सेवा पुर्‍याउँदै आएका छन् । मुलकभरको कुल निक्षेपमध्ये ८ प्रतिशत यो प्रदेशमा संकलन हुँदै आएको छ । तर, कर्जा उपयोग अनुपात भने निक्षेप अनुपात भन्दा एक प्रतिशत विन्दुले बढी छ । यो प्रदेशले कुल कर्जाको ९ प्रतिशत उपयोग गरेको देखिन्छ । यो प्रदेशमा रहेका ८५ स्थानीय तहमध्ये ६७ मा वाणिज्य बैंक पुगिसकेका छन् ।
प्रदेश ५ स् वित्तीय पहुँच, शाखा, निक्षेप संकलन र कर्जा उपयोगका हिसाबले यो प्रदेश मध्यम स्तरको देखिन्छ । वित्तीय संस्थाका कुल शाखामध्ये करिब १८ प्रतिशत यो प्रदेशमा छन् ।
जसमध्ये वाणिज्य बैंकका ३ सय ९०, विकास बैंकका २ सय ४२ र वित्त कम्पनीका २५ वटा शाखा छन् । यो क्षेत्रमा प्रतिशाखा आश्रित जनसंख्या ७ हजार ६ सय ९४ जना छ । कुल निक्षेपमा यो क्षेत्रको योगदान ७ प्रतिशत छ भने १० प्रतिशत कर्जा उपयोग यो प्रदेशमा भएको देखिन्छ । यो प्रदेशमा रहेका १ सय ९ स्थानीय तहमध्ये वैशाखसम्म ८५ वटामा बैंक पुगिसकेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।
प्रदेश ६ स् वित्तीय पहुँच, शाखा, निक्षेप संकलन, कर्जा उपयोगमात्र नभएर वित्तीय साक्षरतामा पनि सबै भन्दा पछि देखिन्छ कर्णाली प्रदेश । कुल शाखाको जम्मा ३।१ प्रतिशतमात्र यो प्रदेशमा छन् । यो प्रदेशमा रहेका १ सय १३ वटा शाखाहरुमध्ये वाणिज्य बैंकका १ सय ३, विकास बैंक ८ र वित्त कम्पनीका २ वटा छन् । यो क्षेत्रमा सञ्चालित प्रत्येक शाखाले औसतमा १३ हजार ८ सय ३३ जनालाई वित्तीय सेवा पुर्‍याउँदै आएका छन् । प्रतिशाखा आश्रित जनसंख्याका आधारमा यो प्रदेश दोस्रोमा छ । यो प्रदेशले कुल निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहको १र१ प्रतिशत मात्र हिस्सा ओगटेको छ । यो प्रदेशमा ६९ वटा मात्र स्थानीय तह छन् । ती मध्ये ३८ स्थानमा मात्र वाणिज्य बैंक पुगका छन् ।
प्रदेश ७ स् यो प्रदेश वित्तीय पहुँच र साक्षरताका हिसाबले कर्णाली प्रदेशपछिको कमजोर देखिन्छ । मुलुकभर रहेका कुल शाखामध्ये करिब ६ प्रतिशत मात्र यो प्रदेशमा छन् । ती शाखाहरुले औसतमा १३ हजार ३९ जनालाई वित्तीय सेवा पुर्‍याउँदै आएका छन् । यो प्रदेशमा वाणिज्य बैंकका १ सय ६६, विकास बैंकका ४६ र वित्त कम्पनीका ३ गरी २ सय १५ शाखा सञ्चालनमा छन् । कुल निक्षेप संकलनमा यो प्रदेशको हिस्सा २ प्रतिशत मात्र छ । यसैगरी कर्जा उपयोगका हिसावले पनि यो प्रदेश निकै पछि छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल कर्जाको ३ प्रतिशत मात्र यो प्रदेशले उपयोग गरेको देखिन्छ । यो प्रदेशमा रहेका ८८ वटा स्थानीय तहमध्ये वैशाखसम्म ४७ वटा स्थानीय तहमा मात्र बैंक पुगेका छन् । स्र्रोतः ई कान्तिपुर डट कम